Qeybta 1: waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan m2ts subtitles: Wondershare Video Converter Ultimate
Qeybta 2: Sida loo soo saaro subtitles ka m2ts files
Qeybta 3: Halkee download subtitles u movies
Subtitles waa files la gundhig u videos ee qaybaha kala duwan si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo arrintan la xiriira. Sidoo kale waa in la ogaadaa in subtitles waa habka ugu wanaagsan si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u videos iyo kharashka waxaa sidoo kale ku badbaadi marka ay timaado dubbing sidoo. The m2ts subtitles waa adag tahay in lagu daro iyo nidaamka la xidhiidha sidoo kale aha arrin sahlan in dabagal. Marka ay timaado in ka kaaftoomi guud ka dibna waa in la ogaadaa in user ay u baahan tahay in la hubiyo in barnaamijka ugu wanaagsan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ama lagala soo bixi si loo hubiyo in dadka ka heli natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira.
Part1: waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan m2ts subtitles: Wondershare Video Converter Ultimate
Barnaamijka waxaa lagu sakhiray waxa lagu yaqaan diinta video iyo maqal ah ee files si qaabab kale sida ay hubiso in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user mar ma gudahood oo dhan ka dhigi doonaa. Laakiin aad u yar oo dadka isticmaala waxaa ka mid ah aragtida ah in barnaamijka uu leeyahay maqan iyo jawharad ah feature ee ku daray subtitles oo sidaas daraaddeed mar kale yaab ayaa laga sameeyey Wondershare arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in geeddi-socodka uu yahay mid aad u badan ay fududahay in la raaco iyo user wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in talaabooyinka halkan ku xusan la raacay sida ay la qoray si loo hubiyo in arrinta aan lagu xalin kaliya laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican waxa ay sidoo kale waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in barnaamijka la soo bixi website-ka rasmiga ah si ay nuqul updated la soo bixi mar kasta oo goobta waa la soo booqan doonaa,
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in geeddi-socodka laftiisa dhaliya. Barnaamijka waxaa markaas waa in la soo bixi, rakiban oo ay maamulaan ka dib marka la sameeyo:
2. badhanka dar faylasha markaas waa in la riixi si loo hubiyo in files in ay tahay in la diinta qaabab iyo subtitles kale oo la in lagu daro waa takooran u user ee arrintan la xiriira:
3. Wixii ku daray Cinwaan user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in fallaadhiina waxay ka hor button ma jiro waa la sii adkeeyey in la sii wado,
4. user ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in uu furmo in kor booda waxaa loo isticmaalaa si dooro file Cinwaan in joogo nidaamka:
5. Marka file ah ayaa lagu daray user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button diinta la sii adkeeyey si aad u hubiso in file ah waxaa loo baddalaa iyo habka ka baxayo:
Part2: Sida loo soo saaro subtitles ka m2ts files
Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud in la raacno. User xaq u baahan tahay inaad kala soo baxdo barnaamijka loo yaqaan tsMuxer in lagu yaqaan oo cajaa'ibyo sameeya arrintan la xiriira. Si aad u xaqiijiso in sida ugu fiican ee waxaa laga soo barnaamijka waxaa lagula talinayaa inay raacaan tallaabooyinka ay halkan si la mid ah sida ay u hubiso in arrinta aan lagu xalin kaliya ka dhigi doonaa, laakiin dhibaatadu waxaa sidoo kale lagu xalin sida ugu dhakhsaha badan habka sameeyo waxaa laga codsadaa oo waxaa la samayn karaa waqti lahayn gudahood oo dhan.
1. Barnaamijka waxaa ay tahay in la soo bixi http://www.videohelp.com/software/tsMuxeR iyo kaddib marka uu ku rakiban waa in la furay. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in faylasha lagu daray:
2. audio iyo durdurrada video ka dibna waa in loo naafo:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in Demux la xushay:
4. Meesha u subtitles badbaadiya waa in markaas la soo xulay oo waxay noqon karaan dibadda sida mid ka mid ah:
5. Bilowga demuxing button la sii adkeeyey waa in la hubiyo in subtitles waxaa lagu bixiyay iyo habka halkan hasa
Part3: Xagee download subtitles u movies
Ka dib waa saddex websites sare ee arrintan la xiriira:
1. Movies subtitles http://www.moviesubtitles.org/ (freeware) Website-kani waa freeware ugu fiican si loo hubiyo in subtitles ee filimada waxaa lagala soo bixi qaab ku haboon si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo:
Sidoo kale waa mid ka mid ah website-yada si aad u hubiso in subtitles ugu wanaagsan waxaa lagala soo bixi oo intaa ku daray oo gargaar ka mid ah geedi socodka in lagu kor ku soo sheegnay:
Si loo hubiyo in ugu fiican waxaa la siiyaa marka la eego download ee Cinwaan website-kan waxaa lagu talinayaa in dadka isticmaala ay. Waxaa sidoo kale in la xuso in dhammaan dadka isticmaala kuwa aan bixio casriga ah ayaa sidoo kale u isticmaali kartaa website-kan sida ay tahay mid aad u fudud in la raaco iyo inaad kala soo baxdo Cinwaan la doonayo. Wixii arin kasta lagu caawiyo online sidoo kale tarin karo arrintan la xiriira.
Waxaa jira dhowr barnaamij kuwaas oo la soo saaray si loo hubiyo in subtitles waxaa sidoo kale ku daray ama laga soo video oo ku jira in loo isticmaalo in arrintan la xiriira iyo user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in adeegyada ugu fiican waa tarin arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user u baahan yahay si loo hubiyo in dib u eegista user arrintan la xiriira waxaa lagu ma aha oo kaliya loo arkaa laakiin waxaa sidoo kale la siiyay miisaan sax ah in arrintan la xiriira si loo hubiyo in adeegyada ugu fiican yihiin riyaaqay. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay u baahan tahay in la hubiyo in barnaamijka in loo isticmaalay si aad u hesho natiijooyinka ugu horumarsan ama ugu yaraan shirkad wanaagsan ee arrintan la xiriira sidii ay si toos ah u kordhi doono kalsoonida user. Haddii barnaamijka waa adag in markaas isticmaali waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in habka arrintan la xiriira waxaa kaliya ma ahan akhri laakiin user waa in sidoo kale fahamsanahay in arrintan la xiriira. In this tutorial habka ugu habboon in uu leeyahay in la raaco by user ee arrintan la xiriira ayaa keliya ma aha, laakiin waxaa lagu sharaxayaa user ayaa sidoo kale ka heli doontaa aqoonta ku saabsan barnaamijyada software ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo soo saaro iyo Cudarada subtitles si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala ee arrintan la xiriira.
> Resource > Beddelaan > 3 waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan m2ts subtitles